Uxanduva lokuphendula kuRhulumente
Umgangatho wombuso kwesi sikolo umiselwe njani?
Isikolo ngasinye sifumana amanqaku kuzo zonke izikhombisi ezifanelekileyo. Amanqaku kwezi zikhombisi anikwe ubunzima ukuvelisa inqanaba lokugqibela leleta ye-AF, esekwe kwinqanaba le-0-100 yenqaku. (Umthombo wedatha: unyaka wesikolo ka-2018 ukuya ku-9) Funda ngakumbi
Ibanga ngokuhamba kwexesha
Esi salathisi silinganisa ubuchule babafundi kumanqanaba amanqanaba kwinqanaba lesiNgesi / kubugcisa beLwimi nakwiMathematics esikolweni.
Esi salathisi silinganisa ukukhula komfundi esikolweni ngokuphucukileyo. Umfundi ngamnye ufumana amanqaku ngokubhekisele kuhlobo lokukhula olubonakalisiweyo (ukukhula okuncinci, ukukhula okuqhelekileyo, ukukhula okuphezulu). Amanqaku abelwe kusetyenziswa ukukhula okuya kwitafile yobuchule. Izikolo zingadlula amanqaku ayi-100 kule metric.
Ukuthweswa isidanga kunye neKholeji kunye nokulungela ukuSebenza
Esi salathisi silinganisa ukugqitywa komfundi kwiimfuno zokugqithela eIndiana kwiminyaka emihlanu neminyaka emihlanu esikolweni, kunye nokuqinisekiswa komfundi obonisa ukulungela ubupasile.